199. World Cup 2018: ရွှေဖိနပ်ဆုကို ကိန်းဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး ပွဲစဉ်တစ်လျှောက် အကောင်းဆုံး ကစားသမားအဖြစ် မိုဒရစ် သတ်မှတ်ခံရ	-Duwun
#sports/world cup 2018	(03h ago)
ဖွင့်ရန်။ ကိန်းက ၆ ဂိုးသွင်းပြီးရခဲ့သလို မိုဒရစ်ကလည်း သမိုင်းတစ်လျှောက် ဗိုလ်လုပွဲကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့။
198. World Cup 2018: ကမ္ဘာ့ဖလား ဗိုလ်လုပွဲမှာ ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ ပထမဆုံး မန်ယူကစားသမားဖြစ်လာတဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာ	-Duwun
#sports/world cup 2018	(04h ago)
ဖွင့်ရန်။ ပြင်သစ်အသင်းအတွက် တတိယမြောက် ဦးဆောင်ဂိုးကို သွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
197. World Cup 2018: ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ နှစ် ၂၀ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့ ပြင်သစ်အသင်း	-Duwun
196. World Cup 2018: ၁၉၅၀ ကမ္ဘာ့ဖလားနောက်ပိုင်း ဗိုလ်လုပွဲမှာ ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းယူမိတဲ့ ပထမဆုံးကစားသမား ဖြစ်လာတဲ့ မန်ဇူကစ်	-Duwun
#sports/world cup 2018	(05h ago)
195. World Cup 2018: ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပိတ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိထားသင့်တဲ့အချက်များ	-Duwun
#sports/world cup 2018	(10h ago)
ဖွင့်ရန်။ ပိတ်ပွဲအဖွင့်ကို ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ်မှာ စတင်မှာပါ။
194. လူမျိုးစွဲ၊	-M-Media
#အားကစား	(10h ago)
193. World Cup 2018: ဘတ်ပီ ကစားတာကြည့်ရတာ ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခံရတာလို့ ပြောလိုက်တဲ့ ကာကာ	-Duwun
#sports/world cup 2018	(11h ago)
ဖွင့်ရန်။ ဘတ်ပီရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို ချီးကျူးပြောကြားလိုက်တာပါ။
192. World	-Duwun
#sports/world cup 2018	(13h ago)
ဖွင့်ရန်။ ၁၉၅၈ကမ္ဘာ့ဖလားကစပြီး အနှစ် ၂၀မှာတစ်ကြိမ် ချန်ပီယံအသစ်ပေါ်တတ်တဲ့ အစဉ်အလာရှိနေပါတယ်။
191. အမှောင် ကမ္ဘာမှသည် ကမ္ဘာ့ဖလား ဆီသို့ . . .	-YangonMedia
#Sport	(14h ago)
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ဟာ ကမ္ဘာမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့မြို့ဖြစ်ပေမယ့် ရာ၊ ထောင်ချီတဲ့ ပဲရစ်မြို့ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက် တွေကတော့ ရာဇဝတ်မှုတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ အမဲည်းရောင်နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုနယ်မြေကနေ မွေးဖွားကြီးပြင်းလာ သူတွေအတွက်ကတော့ ဘောလုံးကသာ လျှင်ကယ်တင်ရှင်ပါ။ပေါ့ဘာရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာ အဲဒီဆင် ခြေဖုံးရပ်ကွက်လေးမှာပဲ သူများပစ်သတ် ခြင်းခံခဲ့ရလို့ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပေါ့ဘာတို့ ညီအစ်ကိုသုံးဦးစလုံး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားတွေဖြစ်ခဲ့လို့သာ အဲဒီဆိုးသွမ်းမှုတွေပြည့်နှက်နေ တဲ့နွံထဲက ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ \_'\_' ကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘောလုံးပဲကစားခဲ့တယ်။ အဲဒီနည်းလမ်းက ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကို အမှောင် ကမ္ဘာက လွတ်မြောက်စေတဲ့အကောင်း ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ\_'\_'လို့ ပေါ့ဘာက သူဖြတ်သန်းကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ ဘဝနဲ့ပတ် သက်ပြီးပြန်ပြောခဲ့တာပါ။
190. နည်းပြသစ်အဖြစ် ဆာရီကို ချဲလ်ဆီး တရားဝင်ခန့်အပ်	-YangonMedia
ချဲလ်ဆီးအသင်းသည် ကွန်တီနှင့်လမ်းခွဲပြီးနောက် နည်းပြသစ်အ ဖြစ် နာပိုလီနည်းပြဟောင်း ဆာရီကို သုံးနှစ်စာချုပ်ဖြင့် တရားဝင်ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
ဆာရီသည် နာပိုလီကိုသုံးနှစ် ကြာတာဝန်ယူခဲ့စဉ်အတွင်း စီးရီး အေတွင် ဒုတိယနှစ်ကြိမ်၊ တတိယတစ်ကြိမ်ရပ်တည်နိုင်အောင် စွမ်း ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၇ တွင် စီးရီး အေ၏တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး နည်းပြဆုကိုရခဲ့သည်။ ဆာရီက \_'\_'ချဲလ်ဆီးနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုရောက်လာခွင့်ရလို့ ဂုဏ်ယူမိပြီး ဒါဟာကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ အချိန်အပိုင်း အခြားတစ်ခုပါပဲ။ ဖျော်ဖြေမှုပေးတဲ့ ကစားဟန်နဲ့အတူ အောင်မြင်မှုတွေ ရယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်\_'\_'ဟု ဆိုခဲ့သည်။
189. ကမ္ဘာ့ဖလားကြောင့် ဖီဖာထံမှ မန်စီးတီး ငွေအများဆုံးရမည်	-YangonMedia
မန်စီးတီးသည် ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲကြောင့် ကစားသမားများစေလွှတ်ပေးရသည့်အတွက် ဖီဖာထံမှ ငွေအကျိုးအမြတ်အများဆုံး ရသည့်အသင်းဖြစ်လာမည်ဟု စစ်တမ်းတစ်ရပ်ကဖော်ပြခဲ့သည်။
Tonka Communications အေဂျင်စီ၏စစ်တမ်းအရ ဖီဖာထံ မှ ပေါင် ၃ ဒသမ ၉သန်းရရှိမည့် မန်စီးတီးမှာ ငွေအကျိုးအမြတ် အများဆုံးရသည့်အသင်းဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး ဖီဖာမှာကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲသို့စေလွှတ်ပေးရသည့် အသင်းများအား ကစားသမားတစ်ဦးလျှင် တစ်ရက်ပေါင် ၆,၄ဝဝ နှုန်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
မန်စီးတီးအသင်းသည် ရု ရှားတွင်ကျင်းပနေသော ကမ္ဘာ့ဖလားသို့ ကစားသမား ၁၆ ဦးအထိ စေလွှတ်ပေးခဲ့ရသည်ဖြစ်ရာ အရေအတွက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ခြင်း ကြောင့် ငွေအကျိုးအမြတ်အများ ဆုံးရလာမည်ဖြစ်သည်။ မန်စီးတီး၏နောက်တွင် ရီးရဲလ်က ပေါင် ၃ ဒသမ ၈သန်း၊ ချဲလ်ဆီးက ပေါင် ၃ ဒသမ ၅သန်းဖြင့် ဒုတိယနှင့် တတိယအများ ဆုံးရရှိကြမည်ဖြစ်သည်။
188. ယမကာညနေခင်းတစ်ခွက်	-ElevenMedia
#Features	(14h ago)
(၁) နေ့တစ်နေ့ကို ဖန်ခွက်ထဲမှာထည့်ပြီး မော့သောက်လိုက်သည်။ ထိုအခါ ညနေခင်း၏အတွေးများ ရင်ဘတ်ထဲသို့ စီးမျောသွားတော့သည်။ နေရောင်သည် တဖြည်းဖြည်း အရောင်ပြောင်းလာသည်ကို သိစိတ်ဖြင့် လက်ခံရယူနေမိသည်။ ယမကာညနေခင်း တစ်ခုဆီ ငြိမ်သက်စွာ ချဉ်းကပ်ကြည့်လိုက်သည့်အခါ ယမကာညနေခင်း၏ အထီးကျန် တိတ်ဆိတ်မှုသည် […]
187. အရိပ်မည်း	-ElevenMedia
ညရင်ခွင်သည် တိတ်ဆိတ်မှုတို့ ကြီးစိုးနေသည်။ ပုရစ်နှင့် ပုစဉ်းရင်ကွဲသံမှလွဲ၍ ကျွန်တော့်ကမ္ဘာတွင် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မရှိသလိုပင်။ ကျွန်တော်၏ မျက်ဝန်းအိမ် ပိတ်ကားချပ်ပေါ် အရောင်မျိုးစုံ ဥဒဟိုသွားလာ လှုပ်ရှားနေသည်။ ရေဆန်ကို ကျော်ဖြတ်ရန်အတွက် နိုးတစ်ဝက်အိပ်မက်နှင့်။ တစ်ကိုယ်ရေ အတွေးစများဖြင့် ညနက်ထဲ […]
186. The Daily Eleven Newspaper – Cartoons (15-07-2018)	-ElevenMedia
#Cartoon	(14h ago)
185. လိုဏ်ဂူအတွင်းမှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့် ထိုင်းကလေးငယ်များအား The Best ဆုပေးပွဲတက်ရန် FIFA ဥက္ကဋ္ဌ အင်ဖန်တီနို ဖိတ်ကြား	-ElevenMedia
Photo: Voetbal International ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (FIFA) ဥက္ကဋ္ဌ အင်ဖန်တီနိုသည် ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့ရှိ ထမ်လွန်လိုဏ်ဂူအတွင်း ပိတ်မိနေရာမှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့် လူငယ်ဘောလုံးသမားများအား စက်တင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပမည့် The Best ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုပေးပွဲအခမ်းအနားသို့ […]